Eyona midlalo yechess ilungileyo kwiPC | Iindaba zeGajethi
UPaco L Gutierrez | 09/04/2021 18:22 | Ukuhlaziywa ukuba 09/04/2021 18:39 | ngokubanzi, Videogames
Ukuba kukho umdlalo webhodi yeklasi kunye neyolonwabo, apho uxinzelelo lwethu lubalulekile ekuphumeleleni, ngokuqinisekileyo i-Chess, umdlalo webhodi apho isicwangciso kunye nokucinga ngokuhamba ngononophelo kuya kuba sisitshixo sokuphelisa uloyiso. Lo mdlalo wabona ukuqala kwawo kwiminyaka engama-600/800 emva kukaKristu kwaye kwada kwangekhulu le-XNUMX ukuba wangena eSpain ngeArabhu. Ngaphandle kwamathandabuzo, umdlalo wembali uhlala umncinci nangona ulahlekelwe ngumsi omninzi kwiminyaka yedijithali.
Okwangoku kuyinto eqhelekileyo kuthi ukuba kungabikho mntu udlala umdlalo weChess. Ngexesha leefowuni eziphathwayo kunye nemidlalo yevidiyo, kubonakala kunzima ukubona inkwenkwana eneminyaka okanye indoda edlala umdlalo kwibhodi yeklasikhi, ke olona khetho lufanelekileyo ukuba sifuna ukudlala i-chess kukwenza ngendlela yevidiyo umdlalo. Kodwa Ayingomdlalo nje kuphela, umdlalo wechess uthathwa njengomdlalo wobukrelekrele kwaye iitumente ezinkulu zidlalwa kwihlabathi liphela ngemidlalo enokuhlala iiyure ezi-6. Kweli nqaku siza kubona eyona midlalo yasimahla yechess yePC ivezwe.
1 Imidlalo yechess yePC
1.1 UFritz Chess 17
1.2 IChess Ultra
1.3 Izihloko zeChess
1.4 I-Zen Chess: Iqabane elinye
1.5 ULucas Chess
1.6 Umdlalo weChess
1.7 Itafile yeTablet
2 Iiwebhusayithi zokudlala i-chess
Imidlalo yechess yePC
Siya kwiinkcukacha kuluhlu oluncinci lweyona midlalo ye-chess inomdla esinokuyifumana kwiqonga lePC, zonke zinesicelo esihlawulelweyo okanye sasimahla sokhetho lomdlali. Singafumana kumdlalo weklasikhi kwimilinganiselo emi-2 okanye kwimidlalo ebanzi ngakumbi kwimilinganiselo emi-3 ngemizobo esengqiqweni.
UFritz Chess 17
Siqala ngomnye wemidlalo yechess ngemizobo ebalaseleyo, umdlalo ojolise ikakhulu kwabo badlali bangenamava abafuna ukonwabela amava anelisayo njengoko emnandi emehlweni. Isihloko kakhulu kucetyiswa zii-greats zalo mdlalo ngamagqabantshintshi kunye nedatha enkulu yezinye zazo, njenge Kasparov enkulu. Lo mdlalo uphinde uhlalutye indlela yethu yokudlala ukuze sizibeke kwinqanaba lokudibanisa kunye nabachasi abakwiqondo lethu elifanayo.
Sineqonga langaphakathi apho sinokuphelisa ukuthandabuza nabanye abadlali okanye sinike izimvo kwimidlalo yabo ebonwe kwenye imidlalo. Kodwa lo mdlalo ubalaseleyo lixabiso lawo kwaye lelo lixabisa i-50 yee-euro ke nangona ingumdlalo owonwabisayo amaxabiso alo ayathintelwa ukuba sifuna ukudlala umdlalo omnye.
Siqaqambisile icandelo lomzobo womdlalo odlulileyo kwaye le Chess Ultra ayibuyi mva kule nkalo, kuba yenye yemidlalo yechess enelona candelo lobugcisa liluhlu. Umdlalo uyakwazi ukusibonisa imifanekiso ukuya kwisisombululo sendalo se-4K. Inemowudi yomdlali omnye kunye nemowudi enkulu yabadlali abaninzi apho sinokufumana imbangi phantse kwangoko.
Ukuba le nto siyifunayo kukudlala wedwa, sineendlela ezahlukeneyo zomdlalo kunye nobukrelekrele obusebenzayo obusebenzayo, businika imidlalo ebukhali nehlala ixesha elide ngokungathi ngumdlalo wokwenyani. Umdlalo ekucetyiswa kakhulu kuwo nawuphi na umlandeli wechess. Ngokungafaniyo neyangaphambili, le inexabiso elinomtsalane kakhulu nge- € 5,19 ekhoyo ngoku Steam.
Ngoku siya kumdlalo wokuqala wasimahla kuluhlu kwaye mhlawumbi yenye yezona zilungileyo kuba iyakonwabela kokubini icandelo elilungileyo lobugcisa kunye nexabiso elifanelekileyo leenkcukacha. Inika inqanaba elikhulu leenkcukacha kwibhodi nakwiziqwenga. Umdlalo othandwa kakhulu phakathi kwabalandeli bechess kuba isimahla kwaye nangenxa yoluntu olukhulu oluhamba nayo.
Sinamanqanaba ahlukeneyo obunzima ukuze sikwazi ukonwabela umdlalo ngaphandle kokukwazi kwethu. Kuyacetyiswa ukuba siqale kwezona ziphantsi ukuba sinomhlwa. Njengoko besitshilo ekuqaleni, umdlalo ukhululekile ngokupheleleyo kwaye sinokuwukhuphela kweyakho Iphepha lewebhu.
I-Zen Chess: Iqabane elinye
Sifikile kweyona midlalo ilula kwaye imfutshane kakhulu kuluhlu, olunoyilo oluncinci kakhulu isikhumbuza ngakumbi ngomdlalo weselfowuni kunomdlalo wekhompyuter, kunye necandelo lemifanekiso elenziwe lula. Le Zen Chess ijolise kubaphulaphuli abaqhelekileyo abafuna ukudlala imidlalo evulekileyo nekhawulezayo ngaphandle kwempumelelo enkulu.
Ngaphakathi Sifumana imiceli mngeni emininzi ekufuneka siyoyisile eyenziweyo zezona nkosi zibalaseleyo kwihlabathi lechessNjengoko siqhubeka, imiceli mngeni iya isiba nzima ngakumbi, nangona injongo yethu ihlala ifana, ukujonga ngokukhawuleza ukuba siphumelele ukuphumelela umdlalo. Ixabiso layo lilula kwaye sinokulufumana Steam nge € 0,99, kucetyiswa kakhulu ukuba into esiyifunayo kukuzonwabisa nje.
I-Lucas Chess ngumdlalo obonakala njengomthombo ovulekileyo, ke sinokuzikhuphela simahla kwiwebhusayithi yayo. Sineendlela ezingama-40 zomdlalo apho sinokuqala khona ezantsi ukuze siziphucule de sidlale imidlalo njengenkosi eyinyani. Ubukrelekrele bokwenza buguquke ngokugqibeleleyo kwinqanaba ngalinye lobunzima Kwinqanaba eliphezulu, isinika imidlalo ye-epic esemgangathweni ophezulu.
Sinendlela yabadlali abaninzi yokujongana nabadlali abavela kwihlabathi liphela ngomgangatho ophezulu. Iimpawu zomdlalo ubuninzi bezicwangciso kunye noqwalaselo singayiguqula imidlalo ngalo naliphi na ixesha kwaye ngenxa yoko singaphazamisi umdlalo ukuba kukho into engekhoyo njengoko sifuna.
Umdlalo onomdla kakhulu ukuqala kwihlabathi lechess, kuba yinkqubo eyilelwe kunye nokufunda. Ifumene amabhaso amaninzi akhethekileyo kwicandelo ngokulula kwayo kunye nayo Inani elikhulu lamanqanaba obunzima, evumela ukulungelelaniswa kwalo naluphi na uhlobo lomdlali. Eyona nto intle malunga nale nkqubo kukuba isplatlatform kwaye singayifumana kuzo zombini iikhompyuter kunye nokuhambahamba, ke kuyacetyiswa kakhulu.
Esona siphoso sakhe sikhulu sisexabiso Kwaye ayingomdlalo wexabiso eliphantsi, amaxabiso ayo yi-70 yee-euro nangona inenguqulo yeentsuku ezingama-30 ye-Mac okanye yeWindows, ngelixa inguqulelo yeselfowuni ibiza malunga ne-10 euros kwaye inenqaku lasimahla elisikiweyo esinokonwabela kulo ukuba siqhelekile. abadlali.
Njengoko igama layo lisitsho, yeyona simulator yomdlalo webhodi, ifumene ukuthandwa kakhulu kule minyaka idlulileyo ngenxa yemidlalo eyahlukeneyo, kodwa igxininisa umdlalo wayo we-chess Kunconywa kwiiforam ezininzi ezinikezelwe kwi-chess. Ngokungafaniyo nabanye, lo mdlalo usivumela ukuba senze umdlalo ngendlela esiyithandayo kunye nemithetho yethu, eyenza i-chess iyeke ukuba ngumdlalo wechess.
Njengokuba besesitshilo, singadlala uninzi lwemidlalo yebhodi yeklasikhi, enje ngokutshekisha, amakhadi, iidomino okanye iWarhammer. Sinendlela ye-intanethi yokudlala ngokuchasene nabadlali abavela kwihlabathi liphela ngeeseva zeSteam. Ukusebenzisana kwalo mdlalo kukuba ukuba umdlalo awuhambi ngendlela ebesilindele ngayo, sinokuwukhuphela wonke umsindo wethu kwibhodi yomdlalo kwaye siwuphele umdlalo ngendlela enzima, nangona imbangi yethu ingenakho ukuhlekwa kakhulu. Umdlalo uyafumaneka kwi Steam nge € 19,99 kuhlobo lwayo oluqhelekileyo okanye nge- € 54,99 kuhlobo lwayo lwepakethi ezi-4 ezibandakanya wonke umxholo wayo owongezelelweyo.
Iiwebhusayithi zokudlala i-chess
Apha siza kufumana ezinye iiwebhusayithi esinokuthi sidlale kuzo chess kwi-intanethi ngaphandle kwesidingo sokufaka usetyenziso kwikhompyuter yethuKananjalo asinazidingo zincinci kuba siza kudlala ngokusasaza kwisikhangeli sethu sewebhu.
Idumile kwaye igqibelele iwebhusayithi apho sinokufumana khona iinjini zomdlalo kunye nebhodi yokubeka indawo apho sinokufumana ngaphezulu kwesigidi semidlalo kuzo zonke iindawo zehlabathi. Ukuba sifuna ukudlala kwi-intanethi, iya kusidibanisa neembangi ngokwenqanaba lethu lesakhono. Sinendlela yomdlali omnye apho kuya kufuneka sikhethe ubunzima.
Le nkqubo yewebhu iqulethe useto oluninzi yomdlalo, nangona inokubonakala ilula kodwa iyasebenza kwaye inzuzo enkulu kukuba sinokuyifumana kulo naliphi na iqonga apho sinesikhangeli sewebhu esidibeneyo.
Okunye Indawo eyaziwayo kakhulu phakathi kwabalandeli bechess, kule webhusayithi sinokuvavanya izakhono zethu nabanye abadlali abakwi-Intanethi, kunye nokudlala ngokuchasene nobukrelekrele obunamandla bokuzenzela. Sikwafumana uninzi lweengcebiso kunye nezifundo zokuphucula izakhono zethu kwaye sikhuphisane ngakumbi.
Ukuba sibuza Sifumana zonke iintlobo zolwazi kunye namaxwebhu abonelelwe zii-chess masters ezilungileyo, kunye nebhodi yeendaba apho sinokufumana khona zonke iindaba malunga nechess okanye imicimbi ezayo. Njengewebhusayithi yangaphambili, oku kungasetyenziselwa nasiphi na isixhobo esinomkhangeli wewebhu odibeneyo, ukuze siyonwabele kwiselfowuni.
Ukuba i-chess iyasilela kwaye sijonge iimvakalelo ezinamandla, sinokuyijonga le enye Uluhlu lomdlalo wevidiyo apho sifumana eyona midlalo ilungileyo yezithuthuthu kwiPC. Kufanele ukuba kuthiwe sivulelekile kuzo naziphi na iingcebiso kwaye singavuya ukukunceda kwizimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Eyona midlalo yechess ilungileyo kwiPC
Sonos Roam, encinci kodwa enobukrakra [HLOLA]